Forum geospatial World - 2019 - Geofumadas
Maarso, 2019 Geospatial - GIS, tabo cusub
Miyaad raadineysaa tiknoolajiyo heer sare ah, badeecooyin cusub iyo xalliyo si aad ugu darsato qiimaha mashruucaaga ama hagaajinta hawl maalmeedkaaga? Horumarka ugu dambeeyay ee warshadaha juquraafiyadeed, oo ka imanaya adduunka oo idil, ayaa lagu soo bandhigayaa Forum Geospatial World 2019, oo ka dhici doonta 2 ilaa 4 ee April ee 2019 ee Taets Art & Event Park, Amsterdam.
Ku soo dhawow bandhigeyaasheena:
Diyaarsaday bandhigida? Waxaa jira tiro yar oo la heli karo! Tani waa fursadaada aad ku dhex gali karto dhagaystayaasha faa'iidada leh, abuuritaanka jagadaada sida hoggaamiye suuqa oo aad gaarto rajooyinkaaga ugu fiican. Ma aha in la sheego in go'aanka muhiimka ah ee soo galaya ay soo booqdaan bandhiggayaga. Ka dhig inta ugu badan!
FASAX BARNAAMIJKA US
DIIWAAN GELIN KARO
Post Previous«Previous Sida loo soo dejiyo sawirrada Google Earth - Khariidadaha Google - Bing - ArkGIS Imagery iyo ilo kale
Post Next Digital Water Works, Inc. waxay maalgelin ka heshaa Bentley SystemsNext »
Hal Jawaab u Jawaab "World Geospatial Forum - 2019"
Hello, galab wanaagsan ka soo Spain.
Anigu waxaan ku jiri doonaa raadinta wax kasta oo dhici kara oo loola hadlo internetka dhacdada.